Ahoana ny fomba hanaovana vondrona fifandraisana amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Misy zavatra momba an'i Apple izay tsy takatry ny saina. Manahy ny hanao zavatra kely vitsivitsy izy ireo, indraindray be loatra, ary manadino ny manampy safidy fototra sasany. Iray amin'ireo safidy fototra ireo ny ny fomba fanaovana vondrona fifandraisana amin'ny iPhone. Ny agenda ao amin'ny iOS dia tena feno ary ao anatiny no ahafahantsika manampy sary, adiresy Internet, mailaka, olona mifandraika ary koa ny mombamomba ny fiaraha-monina, fa ahoana kosa ny vondrona? Inona no ataontsika raha te-hamorona vondrona namana, fianakaviana na karazana vondrona avy amin'ny iPhone isika?
Eny, miaraka amin'ireo rindranasa ananantsika amin'ny toerana misy anao dia tsy ho afaka izahay. Afaka mamadika ny iPhone isika izao, manery ary mitazona fifandraisana, vondrona, manontany an'i Siri na izay heverintsika fa tsy hisy fomba hanaovana vondrona. Soa ihany fa miakatra ny mpandraharaha fampiharana amin'ny App Store rehetra, noho izany dia tsy mila mitady izay tiantsika fotsiny isika (miaraka amin'ny karoka toy ny "contact", "vondrona" na mitovy aminy). Hanoro hevitra ny 3 aho izay manana kinova maimaimpoana ary hahafahantsika mamorona sy mitantana fifandraisana amin'ny fijerena sorabaventy dokam-barotra.
1 Ahoana ny fomba hanaovana vondrona misy fifandraisana amin'ny iPhone
1.1 Miaraka amin'ireo fifandraisana tsotra kokoa
Miaraka amin'ireo fifandraisana tsotra kokoa
Ny marina dia tena intuitive ireo karazana fampiharana ireo. Izy ireo dia toy ny fandaharam-potoanan'ny smartphone, fa ny rindranasa tsirairay misy ny interface manokana. Hanao izao manaraka izao izahay:
Nilalao izahay vondrona.
Izahay dia nilalao tao amin'ny miampy marika (+).
Ampahafantarinay ny Nombre an'ny vondrona.
Nilalao izahay manaraka.
Misafidy ireo fifandraisana izahay izay tianay hapetraka ao amin'ny vondrona vaovao.
Nilalao izahay afa-tsy.
Misy rindranasa an-taonina ao amin'ny App Store izay ahafahantsika mamorona vondrona fifandraisana amin'ny iPhone, saingy ny fifandraisana tsotra dia toa mora indrindra amiko. Safidy hafa mety hahaliana anao ZXContact o aContact. Raha toa ka misy ahy ny tranga misy anao dia manana Mac ianao ary na dia tsy misy ifandraisany amin'ny famoronana azy ireo mivantana avy amin'ny iPhone aza, ny zavatra tsara indrindra dia ny mamorona ireo vondrona mifandray amin'ny fampiharana OS X Contacts. Ary raha tsy izany dia afaka foana ianao mamorona ny vondrona avy amin'ny iCloud.com.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hanaovana vondrona misy fifandraisana amin'ny iPhone
Eny eny, mampalahelo fa avy amin'ny iPhone tsy ahafahanao mitantana vondrona misy ilay rindran-damina zanatany dia afaka nandamina ny fandaharam-potoana aho tamin'ny voalohany noho ny iCloud.com ary indrindra ny fampiharana aContact + izay ilaina mandritra ny taona maro.
Azo atao ihany koa ny mamorona vondrona fifandraisan-davitra avy amin'ny icloud.com ary raha apetrakao hampifangaroina amin'ny icloud ny fifandraisana misy anao dia hita ao anaty fandaharam-potoana ireo vondrona noforonina sy fifandraisana.